အပေးအကမ်း ရက်ရောလွန်းသူတွေ တချိန်ချိန် ရလာမယ့် နောင်တနဲ့ဆိုးကျိုးများ
ပေးကမ်းခြင်း၊ ပေးဆပ်ခြင်းဆိုတာ ကြင်နာတတ်တဲ့နှလုံးသားမှာအမြစ်တွယ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလွန်အကျွံမပေးဆပ်မိဖို့ ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ ပေး ဆပ်ခြင်းဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ရေရှည်မှာ မိမိကိုယ်နဲ့အခြားသူတွေကို မထိခိုက်စေပဲ ဘယ်သူ့ကို ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုပေးရမယ်ဆိုတာကို ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့မှထိန်းကျောင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ဟာအလွန်အကျွံပေးကမ်းတတ်သူတစ်ယောက်လား? နောင်တနဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုမပြောခင် သိထားသင့်တာလေးတွေအရင်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးမိတ်ဆွေတို့.
လူကိုအုပ်စု ၃စုခွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆို ပေးဆပ်သူ၊ ရယူသူ နဲ့ ပေးခြင်းနဲ့ယူခြင်းကြားထဲကသူ ဆိုတဲ့အုပ်စု ၃စုရှိပါမယ်။ များသောအားဖြင်းတော့ ကြားအုပ်စုက လူတွေကိုလောကကြီးမှာအများဆုံးတွေ့ရပါတယ်။ လူနည်းစုကိုတော့ ပေးသူ နဲ့ ယူသူ အုပ်စုတွေမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ပေးကမ်းလိုစိတ်ရှိသူတွေက နွေးထွေးတယ် တစ်ကိုယ်ကောင်းမဆန်ဘူး စာနာတတ်ကြပါတယ်။
ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ အချိန်နဲ့အရင်းအမြစ်တွေကို ပေးကမ်းခြင်းကြောင့် ရသူနဲ့ပေးသူ ၂ယောက်လုံးပျော်ရွှင်အေးချမ်းမှုကို ခံစားတတ်ရပါတယ်။ လောကကြီးမှာတေ့ာပေးသူအုပ်စုကို ပိုလိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်။
လူ့အဖွဲအစည်းထဲမှာ အတ္တကြီးသူ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သူတွေများလာလေ ကမ္ဘာကြီးနာမကျန်းလာလေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ပေးကမ်းမှုဆိုတာမှာလည်း ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ ကန့်သတ်မှုနယ်နိမိတ်တွေမရှိရင် ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပေးကမ်းမှုမှာ ဆင်ခြင်တုံ့တရားနဲ့ကန့်သတ်မှုတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာ ဦးစွာသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အကြောင်းရင်းများစွာရှိနိုင်ပေမယ့် အဓိက ကျတာကိုပြောရရင် သင့်ကိုတမင် အခွင့်အရေးယူခြင်းက ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အတ္တကြီးတဲ့လူတွေ သင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းထဲဝင်လာခြင်းကို တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။ အကူအညီတွေပဲဆက်တိုက်လိုက်တောင်းနေတတ်သူတွေကို တားဆီးနိုင်ပါတယ်။ သင်ချစ်တဲ့သူတွေ ကလေးတွေ၊ မောင်နှမတွေ ကိုလွတ်လပ်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်အားကိုးရန် အားပေးနိုင်ပါတယ်။ တချိန်မှာ နောင်တနဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ်အပြစ်တင်ခြင်းကတား ဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။
ငါဟာအပေးအကမ်းလွန်သူတစ်ယောက်လား၊ ငါ့ပေးဆပ်မှုတွေက ငါ့ကိုထိခိုက်နစ်နာစေပီလားဆိုတာ သင့်ကိုသငိမေးရမယ့်မေးခွန်းပါ?ဆိုလိုတာက သင်ဟာသင့်ကိုသင်တောင်မချစ်နိုင်တော့လောက်အောင် များများစားစားပေးကမ်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပီလားဆိုတာကို သေချာစဉ်းစားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင်တော့ ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ပေးဆပ်တတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထိခိုက်မနစ်နာအောင် ပေးကမ်းတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြည့်လိုက်ပါတော့..
ဘာလို့ဆို လူတွေကအလကားရတယ်လို့ထင်နေရင် သင့်ကို ခပ်ပေါပေါပဲဆက်ဆံနေမှာဖြစ်ပြီး ဒုက္ခရောက်ချိန်တိုင်းသင့်ဆီကိုရောက်လာမှာဖြစ်လို့ပါပဲ။ ဒီလိုတွေဖြစ်လာလို့ကြာလာရင် သင်ဟာလိုသုံးပုံစံဖြစ်လာပြီး သင့်ကိုဘယ်သူမှလေးစားတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုလိုတာက ကိုယ့်ရှိတော့ပုန်းဝှက်စားမယ် ကိုယ့်မရှိတော့ ဂုန်းလိုက်ဆင်းမယ်ဆိုတာမျိုးတွေ သင့်ဘေးမှာ ပတ်လည်ဝိုင်းနေပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်သင့်ကိုသင်ဝဝလင်လင်ချစ်ပြီး သင့်ကိုမထိခိုက်မှသာ ပေးကမ်းရက်ရောမှုတွေဆိုတာလုပ်သင့်တယ်လို့အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ သင်ကအားနာတတ်သူ သဘောကောင်းသူ ကြင်နာတတ်သူတစ်ယော က်ဆိုတာ ကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပေမယ့် ဘယ်အရာမှ အလွန်အကျွံဖြစ်တာမကောင်းပါဘူး။ နိဂုံးချုပ်အ နေနဲ့ပြောရရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထိခိုက်လာနိုင်တဲ့ ပေးဆပ်မှုတွေ ပေးကမ်းမှုတွေ ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဖို့ပါပဲ။ တကယ်အကူအညီလိုလို့ပေးရတာမျိုးက အ ကြေ ာင်းမဟုတ်ပေမယ့် အတ္တဗဟိုပြုရယူလိုမှုကိုကြည့်တတ်တဲ့သူတွေကိုပေးကမ်းနေရင် သင့်ဘဝတစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်..ဖြစ်နိုင်ရင်သင့်ရဲ့ပေးကမ်းရက်ရောမှုတွေကိုတကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာပဲသုံးကြည့်ပါမိတ်ဆွေ..
REF_Power Of Possitvity